Microsoft yakasaina chibvumirano chekujoinha kuvandudzwa kweOpenJDK | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura, zvakazozivikanwa kuburikidza neshoko rinotumirwa kuOverJDK nharaunda yekuparadzira nharaunda, umo Bruno Borges anobva kuMicrosoft's Java Chigadzirwa Management Chikamu, akazivisa izvozvo Microsoft yakasaina zviri pamutemo chibvumirano chekubatana neOracle "Oracle Contributor Agreement" uye yakagamuchirwa munharaunda yeJava.
Naizvozvo muchikamu chekutanga, timu yekusimudzira yeMicrosoft Java zvakagadzirirwa kugumira kugadzirisa bugs uye kuita backport basa kujoina nharaunda uye kujairana nemitemo yekusimudzira yeOpenJDK. Iyo Java Injini Yechikwata ye Microsoft yakatosimbisa kuti iri kusangana nemamwe mapoka uye matavi eMicrosoft anoshandisa Java, pamwe chete nevadyidzani munharaunda yeJava, kusanganisira Oracle, Azul Systems, Red Hat, Pivotal, Intel, neSAP.
Semuenzaniso, Microsoft yakatoona kuti munharaunda yeOverJDK, nzira yakasarudzika yekusimudzira hunyanzvi ndeyekutanga kukurukura shanduko mabara asati aburitswa.
Ipapo yakasimbisa kuzvipira kweMicrosoft kuJava uye kuti timu iri kutarisira kudzosera chimwe chinhu kunharaunda yeJava. Nekudaro, timu haizongopaza chete neruoko runorema, ivo vachatanga nediki diki gadziriso uye nezvimwe. saka vanogona kudzidza kuve "vagari vakanaka mukati memharaunda yeOpenJDK."
Uye ndizvo izvozvo yatove nguva yakareba kubvira Microsoft yashanda yakabatana naOracle kutora chikamu mukusimudzira kweJava kuona kuti iyo JVM inopa kuita kwakaringana pane yako Windows inoshanda sisitimu.
Zvekare, kutorwa kweMicrosoft kweJava kwauya nenzira refu kubva kuma1990, apo musiki weJava Sun Microsystems akamhan'arira Microsoft kutyora chibvumirano.
Sun yakataura kuti Microsoft yakagovera vhezheni yeJava iyo yakanga isingawirirane neZuva, iyo yakakanda chipanera muchivimbiso cheSun "Nyora Kamwe, Mhanya Kwese" kweJava. Microsoft yakapindura, uye gakava rakagadziriswa kutanga kwa2001.
Kwemakore mashoma apfuura, Microsoft yanga ichitangisa mishandirapamwe yekutsvaga vanhu uko main Chinangwa chaive chekukwezva vaimbove vashandi veOracle kuti vasimbise matimu ekuvandudza maturusi. Izvi zvakatungamira mukumisikidzwa kwemaJava kits ekuvandudza ayo anotendera Java vagadziri kuyanana nemasevhisi avo pane yavo Azure Cloud chikuva.
Asi zvakadaro ino inguva yekutanga kuti hofori ibatanidze OpenJDK mukati memabasa ayo kupa zvakananga kuJava budiriro. Borges pachake ndiye aimbova mugadziri weOracle. Akaunza Martijn Verburg semutungamiri weboka reinjiniya reJava iro richashanda pamwe chete nevamwe vanobatsirana munzvimbo yeJava.
Martijn Verburg ari zvakare CEO weJClarity, anotungamira anobatsira kuAdoptOpenJDK yakawanikwa neMicrosoft muna Nyamavhuvhu gore rino kusimudzira rutsigiro rweJava paAzure. Saka zvingangogara zvechokwadi kuita uye kuramba ichipa kune iyo Java nyika, izvozvi chete neMicrosoft muzvikamu zvayo.
OpenJDK ndiyo yemahara vhezheni yeJava yekuvandudza chikuva pasi pechinhu chemutauro unotarisana nechinhu. Iwo mhedzisiro yekugara uchiedza kunoitwa nekambani inonzi Sun Microsystems.
Uku kumisikidza kwakanyorwa mukati meGNU GPL rezinesi kunze kwekubatana, saka zvimwe zvezvinhu zvemafolda ekirasi yeJava uye mawebhusaiti zvinopedziswa kubva pamatemu etsamba kuitira kuti zviongororwe mukati mevhezheni yakatarwa seGNU.
Bruno Borges anoratidza kuti, pakutanga, Backports achiri kuenderera mberi nekucherechedza mashandisirwo uye marongero anomhanya paOpenJDK, semuenzaniso, kurukurai pane tsamba yekutumira kuti mubvumirane musati matarisa kushambadzira chigamba.
Unogona kuverenga iro rekutanga meseji Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft yakasaina chibvumirano chekujoinha kuvandudzwa kweOpenJDK